Nisy ny latabatra boribory niarahan’Andriamatoa Emmanuel de Tailly, filoha tale jeneraly lefitry ny vondrona Star niaraka tamin’ny sendikan’ny indostria eto amintsika andro vitsy lasa izay. « Indostria, avokavoky ny fampandrosoana » no lohahevitra novoaboasana nahafahan’ny roa tonta nijery paikady hahafahana mampivelatra ny indostria eto amintsika hanaingana ny toekarem-pirenena. Tsiahivina fa manana mpiara-miasa manodidina ny 2.000 isa ny orinasa Star ankehitriny ka ny 99 %-n’ireo dia teratany Malagasy avokoa. Miara-miasa amina tantsaha manodidina ny 20.000 isa ihany koa izy ireo ka anisan’ireny ny ao Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony ary DIANA. Malagasy avokoa no mampidi-bola ho azy ireo izay mahatratra hatrany amin’ny 14 miliara Ariary isan-taona.